Habka Suuqgeynta Inbound | Martech Zone
Habka Suuqgeynta Inbound
Talaado, Oktoobar 16, 2012 Douglas Karr
Saamaynta Saamaynta & Naqshadaynta ayaa isku soo koobtay sawirkan quruxda badan Habka Suuqgeynta Inbound taasi waxay ku soo koobeysaa geedi socodka suuq geynta 6 talaabo. Suuqgeynta gudaha waa geedi socod isku dhafan - oo leh ku-tiirsanaan badan oo u dhexeeya kanaalada, sidaa darteed ma fududa in la helo hanaan fudud oo garaaf ah sidan.
Suuq-geynta Inbound waxay noqon kartaa geedi socod aad u jahwareer badan. Hadafkeenu waa inaan ka dhigno sida ugu fudud ee suurtogalka ah, oo aan kuu helno natiijooyinka aad raadineyso. Hubi nidaamka aan soo saarnay si aan u helno yoolalkaaga Suuqgeynta Inbound.
Waxyaabaha igu soo kordhay kaliya waxay noqon doonaan tijaabinta iyo wareegga laga bilaabo tallaabada 6 ilaa tallaabada 1aad. Suuqgeynta gudaha waxay u baahan tahay baaris si loo hubiyo in dadaalada muhiimka ah ee aad codsaneysid ay saameyn run ah leeyihiin oo aad ku tijaabineyso farriimo kala duwan, wadiiqooyin kala duwan, iyo dalabyo kala duwan. Qaybta kale ee maqan ayaa ah wareegga laga bilaabo cabbiraadda iyo hagaajinta istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Garashada waxa shaqeeya waa inay kaxeeyaan dadaalkaaga suuq-geynta gudaha!
Tags: 6 talaabo oo suuq geyn ahmarketing inboundsuuq-geynta suuq-geynta gudahahabka suuq geyntahagaajinta barbaarintaSEO
Maxay Tahay Inaad Leedahay Foomam Yar Oo Foormooyin Ah Waxay Keeneysaa Beddelaad
Sida Loogu Habboonaado Bogga Raadinta Deegaanka
Nov 30, 2012 at 5: 46 AM
Suuqgeynta internetka gebi ahaanba waa soo gal.
Dadku waxay raadinayaan xalkaaga markay internetka ka baaraan. Waxay rabaan
macluumaadka la xiriira waxa ay raadinayaan. Way casuumeen